Hunhu hunhu hwemutungamiri akanaka anonamira
Kuru Agile Hunhu hweMutungamiri Akanaka Agile
Hunhu hweMutungamiri Akanaka Agile
Unoona sei mutungamiri akanaka weAgile?
Agile yekuvandudza nzira yakave iriko kwemakore akati wandei izvozvi uye yave tsika kune mazhinji tech makambani. Asi nei zviripo kuti mamwe masangano anonyatso kubudirira muAgile, nepo mamwe achinetseka? Zvakatoipisisa ndezvekuti kana mamwe zvikwata achifunga kuti Agile nekuti ivo vanodzidzira pfungwa dzakapfava senge kusimuka kwezuva nezuva uye kutarisisa kumashure, asi muchokwadi havasi ivo veAgile.
Ini ndinotenda mutsauko uri pamusoro pevatungamiriri, angave ari ScrumMaster, Dhirivhari maneja kana CTO vane mvumo yekuisa hwaro hweAgile inoshanda tsika musangano uye mune ino positi isu tinotarisa kune gumi nemaviri hunhu hwemutungamiri akanaka weAgile. .
Ndehupi hunhu hwemutungamiri akanaka weAgile?
1. Chiratidzo uye Chinangwa
Wese munhu ari musangano anofanira kuziva zvaari kushandira. Izvo zvinowanzoitika kuti vanhu vakanyanyisa kubatikana pazasi rebasa rezuva nezuva zvekuti vanorasikirwa nekuona iwo mufananidzo mukuru.
Akanaka Agile Mutungamiri anofanira kuona kuti zvinangwa uye chinangwa chesangano chiri pachena kune wese munhu ane chekuita nekuendeswa kweprojekti, izvi zvinosanganisira zvikwata zvevatengesi uye vanobatika.
Ita shuwa kuti chero basa riri kuitwa riine chinangwa chakajeka uye riri kufamba rakananga kuchiratidzo. Saizvozvo, zvakakosha kuseta miganho uye chiyero chebasa kuitira kuti zvikwata zvisaite zvisina kudikanwa.
2. Zvishoma Zvinoburitswa
Ita shuwa kuti basa rakakamurwa mumabasa uye ma-sub-task kuitira kuti maficha agone kuburitswa mune iterative uye inowedzera mafashoni pane kuburitsa bang bang. Mapurojekiti mahombe anofanirwa kupatsanurwa kuita madiki pazvinogoneka.
Mukukosha, iyi ndiyo pfungwa yeinogonesa kuendesa modhi, iterative uye inowedzera.
3. Pre-Planning Misangano
Mutungamiri agile anofanira kuona kuti zvinhu zviri kumashure zvakasimbiswa uye kuti zvirongwa zvekuronga zvinoitika pamberi pekutangisa kwe sprint. Sezvineiwo nyaya dzinofanirwa kushongedzwa uye kukurukurwa kumhanya kumwe kumberi kuitira kuti kumhanya kusati kwatanga, musangano wekuronga unokurumidza.
Chengetedza rwiyo rwezvikwata 'velocity kuitira kuti chiyero chemasprint chingafungidzirwe. Chero zvimhingamupinyi kana shanduko muzvinhu zvekutanga zvinofanirwa kuziviswa kune wese munhu.
4. Pfupi Feedback Loop
Ita shuwa ipfupi mhinduro loop pakati pechikwata chekuvandudza, dhizaini, chigadzirwa uye vatengi nekuvabatanidza mukutaurirana kazhinji. Basa rinofanirwa kuratidzirwa uye kukurukurwa pachine nguva uye nekuenderera kubvisa chero kusanzwisisana uye zvekufungidzira.
Ita shuwa kuti kufambira mberi kunoenderana neicho chaicho kukosha chakapihwa bhizinesi pane kuenzanisa zvichipesana nechirongwa.
5. Kuenderera mberi Kuvandudza / Kugovana Ruzivo
Onai kuti ruzivo kubva kunhengo dzakasiyana dzechikwata rwakagovaniswa munzvimbo dzakasiyana dzesangano uye kuti diki gadziriso kune chero maitiro anoitika achienderera. Retrospectives uye 'Scrum yeScrum' kazhinji mukana wakanaka wekudzidza pamusoro pezvipingamupinyi uye matambudziko akasangana nawo panguva yekumhanya saka chirongwa chekuita chinogona kuiswa pamwechete kugadzirisa zvipingamupinyi.
Maitiro Akanakisa Ekuenderera Kwayedza muAgile
6. Kukundikana Nokukurumidza
Mutungamiri akanaka agile anofanira kuona kuti zvikwata zvine hushingi hwekuedza matekinoroji matsva nemaitiro. Gadzira nharaunda umo kutadza kudiki kunogona kuitika kutanga uye kazhinji, nokudaro kuchideredza njodzi yekutadza kukuru panopera chirongwa.
Gadzira nharaunda ine hushamwari iyo inofambisa yakanaka kutarisana-ne-kumeso kutaurirana uye kudzikisira kudiwa kwemapepa asina basa, maemail, uye dzimwe nzira dzepasi-bandwidth kutaurirana Semuenzaniso, zvinonyanya kushanda kuva nemuviri kanban bhodhi uko nhaurwa-kumeso hurukuro dzinoitika pakati penhengo dzechikwata kwete Jira kana maturusi akafanana.
8. Tarisa uye Wakaenderana
Ita shuwa kuti timu yakanangana, yakazvipira uye yakanangidzirwa kubasa kwete kuita zvakawanda. Wese munhu anofanirwa kutarisisa kushanda pazvinhu zvakakoshesa zvakanyanya zvinounza kukosha kwebhizinesi. Shanda zvine hungwaru kwete zvakanyanya kuoma.
Shanda nemaneja kuona kuti vanhu chaivo uye zvikwata zviripo panguva yakafanira kuwedzera velocity uye mukana wekubudirira.
9. Kubviswa kweZvipingamupinyi
Kuti timu iendese chigadzirwa chemhando yepamusoro nenguva vanofanirwa kungotarisa pabasa chete uye kusafanira kubata nehusiku hwezuva nezuva kana zvipingamupinyi.
Mutungamiri akanaka agile anofanira kuona kuti zvipingaidzo zvinobviswa nekukasira kana zvasangana, kana kutofungidzira mukana wechipingamupinyi isati yatanga kukanganisa timu.
Tarisa mabhureki nemitsetse, uye shandisa masisitimu kufunga uye akasendama misimboti kugadzirisa kudzikiswa kwebhizimusi kukosha.
10. Kuonekwa kweBudiriro
Ita shuwa kuti munhu wese ari mubhizinesi ane kuoneka kwakajeka kwekufambira mberi uye kuti munhu wese anogona kuona iyo 'hombe pikicha'. Inogona kushandisa madhibhodhi pane skrini zvinonyatsoratidza kufambira mberi padanho repamusoro uye kunoonekwa nguva dzese.
11. Kuzvironga-pachako uye Kuzvimirira
Ita kuti chinangwa nemamiriro azvino zvive pachena kuti vanhu vagone kufunga nekuita zvakasununguka, pasina chikonzero chekuti iwe uvataurire zvekuita. Ita shuwa kuti vanhu vanopihwa matambudziko ekugadzirisa pane kuita mabasa ekuita.
Rangarira kuti kuve timu inozvirongedzera hazviitike nekukurumidza. Kuzvisarudzira-kwete kungoita nezve timu yese mukati mayo mamiriro esangano. Nhengo yega yega yechikwata inoda kuzvirongedza.
12. Kuyambuka-kunoshanda Kubatana uye Kuderera
Mutungamiri akanaka weAgile anofanira kuona kuti zvikwata hazvina kuvharwa kumirira mumwe nemumwe kuendesa basa ravo uye kuti zvikwata zvinoshanda-nekubatanidza vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana uye masilos aderedzwa.
stock market majeti e = android
pafiripi nhare dzakabuda riinhi
Maitiro ekuchinjira kuVerizon, AT&T kana T-Mobile uye chengeta yako nhamba
Kuparadzaniswa kwekuita pakati penyika dzepasi rose neUS mhando zvingangokura neGlass Note 20
Verizon vs T-Mobile vs AT & T: ndiani & apos; vari kuhwina iyo 5G hondo sekutanga kwa2021?